Ngoku musa yemoto ngaphandle! level 43 Looks iyandoyikisa kodwa zonke eBluff yayo, fishies akho aya kuba ekhuselekileyo phambi kokuba uyazi ukuba! Iinjongo ezimbini apha ukugcina izilo ezine (iintlanzi konke ufumana) nokufumana ubuncinane 24 000 iingongoma, peice ikhekhe! …kakuhle ngayo xa usebenzisa izicwangciso zakho, ngenye indlela oku ukuba lixelegu kakhulu!
Uphahla kuvula & bafika iibhloko ngaphezulu!
Ngoku uqala i ibhodi nge 30 esihamba kunye nemibala ezintathu kuphela kwaye ibukeka ngathi ibhodi kulinganiselwe kakhulu, umsebenzi ovela ngaphandle ngaphakathi. Ngoko kwimeko apha umsebenzi lasekhohlo blue wakho, yellow kanye ke zibomvu, sisuse iiseti block kufuneka khela iingongoma eyanele (okanye kudos) ukugcwalisa imitha yakho zidale i firecracker (ah-ha mzuzu!) nokuba nguwe oya kufohloza ukroboze njani iibhokisi metal aphume endleleni.
Ngoko ke kuya kufuneka amane babukele yonke phezulu kwaye ndlela isebenzayo ukufumana le nto ukuba ukubetha imixube big, iibhloko kakhulu umbala omnye kususwa ngexesha aya kuthi ekugqibeleni khela iindawo. Emva kokuba firecracker ngokusetyenziswa ebhodini ukuba ukuthatha ngaphandle ibhokisi phantsi enye intlanzi yakho. (bonke kufuneka babe enye ibhokisi yentsimbi kude ukusuka kunjalo ezantsi!)
Musani ukudla kakhulu ukuya kweli nqanaba okanye usenokuzibona liphelelwa lusishukumisela. Kuxhomekeke isixhobo okanye ikhompyutha udlala kulo kuthatha umzuzu omncinane ukuba imitha ukuqokelela ndikuzalisa kanye kunye lencopho iinkwenkwezi amenyezelayo ukuba Ekutyhobozeni yokubhiyozela kuni ukuthelekisa amanye iibhloko ezinemibala!…yeah kakhulu sifumana THINA Awesome…ngoku kudlule kum firecracker sele!